गोरेलाई देखाएर ठूला माछा गायब ! – RadioMBC
Home > समाचार > गोरेलाई देखाएर ठूला माछा गायब !
२२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १९:४२
अहिलेको चर्चित प्रकरण हो- साढे ३३ किलो सुनकाण्ड । तर, यसलाई सुन तस्करहरुले ‘शून्य किलो सुनकाण्ड’ मा ढिसमिस गरेर गृहमन्त्रालयको अप्रेसनलाई असफल बनाउने प्रयास थालेका छन् ।
ज-जसलाई ‘साढे ३३ किलो सुनकाण्ड’ मा समातिएको छ, उनीहरुले एक लाल पनि सुन बरामद नभएका कारण तस्करी प्रमाणित हुनै नसक्ने जिकिर गर्न थालिसकेका छन् । र, पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामहादुर थापा बादलभन्दा सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुको स्वर चर्को देखिन थालेको छ । गृहमन्त्रालय रक्षात्मक बन्दैछ । सँगसँगै सुन तस्करीको मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्न थालेको छ ।
अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्तिका वयान र प्रारम्भिक तथ्यहरुलाई हेर्दा विमानस्थलबाट सुनको अवैध कारोबार गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिमा मोहन अग्रवाल र तिनका दुई दाजुभाइहरु पनि हुन् । तर, उनीहरु फरार छन् ।भरियाहरु पक्राउ गर्ने तर मालिक कहिल्यै पक्राउ नपर्ने तितो अनुभव छ । त्यसैले अहिले पनि सबै थोक गोरे हुन् भनेर अरुलाई छाड्ने त होइन भन्ने आशंका छ ।
त्यसो त सुन तस्करीमा गोरे कान्छो सदस्य हुन् । उनीभन्दा अगाडि नै भुजुङ गुरुङको समूहले पञ्चायतकालदेखि नै नियमितरुपमा सुन तस्करी गर्दै आइरहेको थियो ।यीबाहेक सुन तस्करीमा अन्य राजनीतिक दलका नेता र ठूला व्यापारीको पनि संलग्नता रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ ।तर, यसमा गोरेतिर देखाएर ठूला अपराधीहरुका छेउमै नपुगी अनुसन्धान सकिने सम्भावना बढ्न थालेको छ । किनभने यो मुद्दा अब गृहमन्त्रालयको भन्दा पनि मोरङ जिल्ला अदालतको हातमा छ । र, यो स्थितिमा अब साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा ठूलो माछा छुट्ने त होइन भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि भेटिन थालेका छन् ।